triatra, auteur sur
Articles écrits par triatra
01/08/2017 triatra 0
Ankoatra ny fifandraisana ara-toekarena, mivelatra amin’ny sehatra hafa ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny firenena Sinoa. Mandalo eto amintsika ary hanolotra finamanana amintsika ny fikambanana Sinoa ho an’ny finamanana amin’ny any ivelany na ny « Association du peuple …Tohiny
Faritra Analamanga : Kaominina 138 no efa nahazo tan-tsoroka
Anisan’ny Faritra voalohany sady goavana eto Madagasikara ny Faritra Analamanga. Mitondra fanazavana mahakasika ireo zava-bitan’ity Faritra ity kosa ny lehibeny, Ndranto Rakotonanahary. Nambarany fa kaominina 138 amin’ireo 140 no efa nahazo tan-tsoroka na/sy fanohanana tamin’ny …Tohiny
Anisan’ireo sangany amin’ny mpiangaly ny Rock Malagasy. Manamarika ny faha-25 taona niakarany an-tsehatra ny tarika Mage 4 ary hanolotra ilay seho « Samy faly » etsy Antsahamanitra ny alahady 06 aogositra izao, manomboka amin’ny 2 ora sy …Tohiny
Bakalorea tekinika : Misy fitanana an-tsoratra isaky ny efitrano fanadinana
Ny marainan’ny andro voalohany tamin’ny fanadinam-panjakana bakalorea tekinika dia mpiadina miisa 12 sahady no tsy tonga nanatrika izany. Fantatra moa fa fihodinana faharoa izany notontosaina nanomboka omaly izany, ary 809.000 no isan’ireo mpiadina ho an’Antananarivo …Tohiny